“Saalax waa Xiddig aad u fiican laakiin waxaan heysanaa laacib joojin kara.”. – Gool FM
“Saalax waa Xiddig aad u fiican laakiin waxaan heysanaa laacib joojin kara.”.
(Bayern) 14 Feb 2019. Gudoomiyaha kooxda Bayern Munich Karl-Heinz Rummenigge ayaa ka hadlay kulanka adag la wada sugayo ay kooxda Liverpool kula ciyaari doonaan lugta hore wareega 16-ka ee tartanka Champions League.
Rummenigge ayaa qiray in kooxdiisa Bayern Munich ay ciyaari doonto laba kulan ee aad u adag, maadaama kooxda ay la ciyaari doonaan ay tahay Liverpool.
Gudoomiyaha kooxda Bayern Munich ayaa sidoo kale ka hadlay xidiga reer Masar iyo kooxda Liverpool ee Mohamed Salah, wuxuuna si weyn u amaanay awooda ciyaareed uu laacibkan ku raaxeysanayo.
Laakiin Karl-Heinz Rummenigge ayaa dhinaca kale xaqiijiyay in ciyaartoyda kooxda Bayern Munich ay awood u leeyihiin inay joojiyaan isaga,
“Salah waa ciyaaryahan wanaagsan, lakiin inta badan wuxuu ku ciyaaraa garabka midig waxaana booskaas ku sugan David Alba, kaasoo ah mid ka mid ah xidigaha ugu fiican aduunka ee booskiisa, waxaana kalsooni ku qabaa inuu shaqo fiican qaban karo”.
Si kastaba kooxaha Liverpool iyo Bayern Munich ayaa ku balansan inay ku wada ciyaaraan kulanka lugta hore wareega 16-ka ee tartanka Champions League garoonka Anfield Talaadada soo aadan.
“Waxba kama qaban karo Alexis Sanchez” – Tababare Solskjær